Akuselona leli kheli – Kusuka ekubeni uStanger Street kwaba uStalwart Simelane Street – The Ulwazi Programme
UStanger Street yaqanjwa ngoWilliam Stanger waba wuMcwaningi Jikelele waseNatali wokuqala futhi wayebambe iqhaza elikhulu ekunikezeni iTheku indlela elisebenza ngayo. Yize impumelelo kaStanger ingasagujwa igama lomgwaqo, idolobha laseStangerstill liliigcinile igama lakhe, kanjalo neStangeria eriopus, eyaziwa nangokuthi yiStanger’s cycad, uStanger akabonwanga njengensika futhi wayibuyiselwa eNgilandi ukuyohlolwa.
Wazalwa ngo-1910, uStalwart Simelane wayengumholi ovelele we-ANC eNatal ngawo-1950. Ngaphambi kwalokho, wasiza ukusungula izikole zabantu base-Afrika ngenkathi esenguthisha eminyakeni yama-30s. Ngo-1952, eqokelwe ekomidini eliphezulu le-ANC, wahola iqembu lokuqala lamavolontiya aseThekwini emkhankasweni weDefiance Campaign. Ngo-1956 wabekwa icala lokuvukela umbuso, futhi wabekwa icala kwaze kwaba sekupheleni kuka-1958.
Umbalo nezithombe kwakhiwe yinxenye ye- “No Longer at This Address” umbukiso nguPeter Machen